जनअपेक्षा अनुसारका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं
दिलबहादुर ऐर, प्रमुख, शुक्लाफाँटा नगरपालिका
शुक्लाफाँटा नगरपालिका कञ्चनपुरको केन्द्र भागमा पर्ने स्थानीय तह हो । विकासमा पछाडि परेको यो नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । नगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधारको अझै अभाव छ । निर्वाचनपछि नगरले जनप्रतिनिधि पाएको पनि २ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा नगरपालिकाले विकासका विभिन्न योजना अगाडि बढाएको नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐर बताउँछन् । अन्य विकास निर्माणलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो २ वर्षमा नगरले हासिल गरेका उपलब्धि, विकास गतिविधि, भावी कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयनका चुनौती लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कञ्चनपुर संवाददाता मदन गिरीले नगर प्रमुख ऐरसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएको २ वर्षभन्दा बढी भयो । यो अवधिमा यहाँका जनताले के के पाए त ?
हामीले भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । नगरका १२ ओटै वडामा पूर्वाधारका काम अघि बढेका छन् । नगर क्षेत्रमा धेरै नयाँ बाटोहरू खोलिएका छन् । सबै वडामा ६ देखि १२ मिटरसम्मका चौडा सडक निर्माण गरेका छौं । प्रत्येक वडाका सडकमा आवश्यकता अनुसार कल्भर्ट बनाएका छौं । अधिकांश योजना जनताको सहभागितामा अघि बढेका छन् । नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने थुप्रै कानून बनाएका छौं । सोही कानून अनुसार नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर काम गरिरहेका छौं । नगरमा सुशासन कायम गर्न विभिन्न समिति निर्माण गरिएको छ ।
सम्पूर्ण नगरवासीलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न प्रत्येक वडामा सम्बन्धित योजना थालिएका छन् । नगरपालिका र वडा कार्यालयको सहकार्यमा प्रत्येक टोल–टोलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइरहेका छौं । गाउँ घर क्लिनिक स्थापना तथा निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाका वडा नं १ र १२ मा स्वास्थ्य सुविधा पुगेको थिएन । हामी आएपछि वडा स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द बनाएका छौं । यस्तै ल्याब र बर्थिङ सेन्टर समेत स्थापना गरेर सेवा दिइरहेका छौं ।
शुक्लाफाँटा–७, ८ र १२ नम्बर वडाको कार्यालय भवन बनाएका छौं । अन्य वडाको कार्यालय भवन पनि चाँडै निर्माण गर्छौं । नगरका झलारी बजार, कलुवापुर बजार क्षेत्रमा सौर्यबत्ती जडा गरिएको छ । गतवर्ष साढे ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका छौं । यस्तै ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल र ३ किलोमिटर सडक मर्मत गरेका छौं ।
नगरपालिकाका गौरवका आयोजना के के हुन् ? ती आयोजनाको प्रगति कस्तो छ ?
नगरपालिकामा आँखा अस्पताल, ५० शैय्याको नगर अस्पताल, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, नगरपालिका कार्यालयको मुख्य भवन, चक्रपथ निर्माण लगायतलाई नगर गौरवका आयोजनामा राखेका छौं । हामी निर्वाचित हुनुअघि घोषित आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । नगर गौरवका कतिपय योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । केहीको हुँदै छ । केही आयोजनाको डीपीआर निर्माण गरेर कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं । नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले शुक्लाफाँटा–४ पिपलाडीमा ५० शैøयाको अस्पताल बनाउन डीपीआर तयार गरेका छौं । यसका लागि चालू आवमा केही बजेट छुट्ट्याएका छौं । झलारीको पिपलाडी रोडमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ । केन्द्रबाट नगरवासीले निःशुल्क सेवा लिइरहेका छन् । भविष्यमा आँखा अस्पताल बनाउने योजना छ । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण यसै वर्ष शुरू हुन्छ । आरयूडीपीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र वडा नं ११ को कृष्ण सामुदायिक वनमा बनाउने भएका छौं । त्यसका लागि जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ । सबै वडामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएका छौं । १२ ओटै वडा जोड्न १२ मिटर चौडा चक्रपथ बनाउँछौं । यस वर्ष त्यसको १६ किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । तरकारी तथा खाद्य वस्तुको सुरक्षाका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्छौं । नगर कभर्ड हल निर्माण पनि यसै वर्ष शुरू हुन्छ । बसपार्क निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गरेर निर्माण अघि बढाउँछौं । नगर गौरवका आयोजना निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्छौं । यस क्षेत्रका सांसदको विकास कोषको बजेट पनि यी आयोजनामा खर्च गर्छौं ।
नगरको बजेट कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ?
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अंग र कार्यापालिका दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी र अधिकार समेत बाँडफाँट गरिएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्याप्त कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । तर हामीले निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म कर्मचारी अभावको सामना गर्दै आएका छौं । कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकेनौं । अहिले पनि नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साझा अधिकारले समेत बजेट कार्यान्वयमा केही चुनौती थप्यो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्‍यो । त्यसले पनि बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौल भयो ।
शहरी क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनको योजना के छ ?
यहाँका शहरी क्षेत्र भनेका झलारी, वनसमिति, कलुवापुर, बन्साह बजार हुन् । नगरपालिकामा शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय (आरयूडीपी)को आयोजना सञ्चालन भएको छ । आरयूडीपी अन्तर्गत यहाँ फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, नगरपालिका भवन र झलारी बजारलाई जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ । अब चाँडै निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन्छ । अस्तव्यस्त बजारलाई व्यवस्थान गरिरहेका छौं । जथाभावी रूपमा सडक छेउमा राखिएका छाप्रा–टहरा हटाउँछौं । बजार क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनका लागि समेत योजना अघि बढाएका छौं । शहरी क्षेत्रमा गतवर्ष ढल–नाला मर्मत तथा सफाइ गरेका छौं । यहाँका सबै बजारमा २ वर्षभित्र ढलको व्यवस्थापन गरिसक्छौं । सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । बजार क्षेत्रको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरणका लागि सौर्य बत्ती जडान गरेका छौं ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ सफल बनाउन नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिका प्रतिबद्ध छ । यहाँका पर्यटकीय स्थल बतासे झरना, सुनदेवी ताल, मणिका धाम, खेरखन्डा ताल, कृष्णसार, बैजनाथ ताल लगायतको प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि पाँचौं नगरसभाबाट बजेट विनियोजन गरेका छौं । पर्यटन बोर्ड र नगरपालिकाको सहकार्यमा नगरपालिकाको वनसमितिमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । त्यो केन्द्रबाट यहाँका पर्यटकीय स्थलबारे सूचना दिन्छौं । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थलमा घुमाउने र प्रचारप्रसार गर्ने योजना छ । मणिका धाम, सुनदेवी ताल, भम्केपानी, रानी ताल, बतासे झरनालगायत स्थलको विकासमा लागेका छौं । जैविक मार्ग निर्माण गर्ने योजना समेत बनाएका छौं । पर्यटनको माध्यमबाट यहाँको विकास गर्नुका साथै स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।
नगरको शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरूले गरेका सुधार के के हुन् ?
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छौं । हामी आउनुअघि धेरै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो । अहिले विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानी लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । हामी सबै (६५ जना) जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो वडामा रहेका विद्यालय अनुगमन तथा सुधारमा लागेका छौं । नगरका ३२ सामुदायिक विद्यालय र २५ संस्थागत विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानमा छौं । निजी स्रोतका शिक्षकका समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिएर लगानी गरेको छ । नगरका कृष्ण माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पढाइ भइरहेको छ । यी विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । नगरपालिकाका सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान पनि छ । हामी शुक्लाफाँटालाई जिल्लाकै पहिलो साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्छौं ।
कृषि क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नभएको छ ?
शुक्लाफाँटा नगरपालिका कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ अन्नबाली राम्रो उत्पादन हुन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं । यो वर्ष ७८ लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं । प्रत्येक वडामा एकजना कृषि प्राविधिक राख्छौं । साना सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट प्रत्येक वडाका टोल–टोलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइरहेका छौं । किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपज भण्डारणका लागि कोल्डस्टोर बनाउँदै छौं । खाद्य डिपो स्थापनाका लागि समेत पहल भइरहेको छ । यसका लागि विभिन्न विभागमा फाइल पुर्‍याएका छौं । किसानले सिँचाइ सुविधा पाए पनि समयमै बीउ तथा मल नपाउने समस्या समाधानका पनि प्रयासरत छौं । किसानलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक तरीकाले खेती गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं । उनीहरूलाई दक्ष बनाउन समय–समयमा तालीम समेत दिने गरेका छौं ।